KHUBARRO SAYNIS OO KU TALIYEY TALLO NEBI MAXAMED KU TALIYEY 1437 SANNO KA HOR | Saxil News Network
KHUBARRO SAYNIS OO KU TALIYEY TALLO NEBI MAXAMED KU TALIYEY 1437 SANNO KA HOR
LONDON (SAXILNEWS.COM)_Khubarro ka socotay jaamacadda British University ee wadanka Ingiriiska ayaa daraasad ay wadeen in muddo ah soo gebo gebeeyey,iyaga oo daraasadaasi ku samaynaayey dhinacyada ugu fiican ee loo seexan karo waqtiga hurdada.
khubaradan ayaa sheegay in qofka oo u seexda dhinaca midig ay u keento caafimaad badan marka loo eego dadka u seexda dhinaca bidix,iyaga oo sheegan in qofka u seexda dhinaca midig uu soo tooso isaga oo caafimaad qaba ,sidoo kalena farxadi ku dheehan tahay ,marka loo eego ka bidixda u seexda.
khubaradan ayaa sheegay in qofka midigta u seexdaa inuu ka badbaado xanuuno badan oo ay ugu horeeyaan xanuunada wadnaha iyo beerka ku dhaca,halka ka bidixda u seexdaana uu halis u yahay inuu wadnuhu istaago ama xanuuno badani ku kulmaan,madaama oo uu wareegiisa dhiigu khal khal gelaayo.
daraasadan intii lagu jiray waxa ka qayb qaatay kumanaan qof oo kamid ah dadka reer Britain,iyada oo waraysiyo lala yeelanaayey dadkaasi,iyada oo la weydiinaayey dhinaca ay u seexdaan markay seexanaayaan iyo waxay dareemaan maray seexdaan,gaar ahaana dhinaca shaqadooda,aragtida iyo caafimaadkooda siday u saamayso.
kuwa u seexda dhinaca bidix ayaa shegay kuna jawaabay in ay karhaan shaqadooda,sidoo kalena wax walba dhinaca xun ka eegaan,taasina ay saamayno ku yeelato,iyaga oo dhibaatooyin caafimaad oo dhinaca wadnaha ahna ka cawday.
dadkaasi dhinaca bidixda u seexda kuwo badan oo ka mid ah ,tiro ahaana gaadhaaya ilaa 36% ayaa sheegay inay jecel yihiin inay kelidood iska seexdaan,iyaga oo karhaaya dadka kale,halka kuwo kale oo gaadhaayey 10% ay sheegeen inay jecel yihiin inay la seexdaan caruurtooda,taasina ay tahay samayn ay keentay dhinacay u seexdaan.
khubarada samaynaysay daraasadan ayaa ku taliyey in dadku iska ilaaliyaan inay u seexdaan dhinaca bidixda ,iyaga oo sheegay in aanay caafimaad ahaan wanaagsanay,waxaanay tani imanaysaa iyada oo 1437 sanno ka hor uu Nebi Muxamed inoo sheegay in loo seexdo midigtu inay fiican tahay musilm ahaan.